ထူးအောင်ရဲ့ ဖက်ရှင်စတိုင် ကို သဘောကျကြောင်း သွယ်ဝိုက်ပြော လာ တဲ့ မင်းသမီးချော“မယ်လိုဒီ” – Zartiman
ထူးအောင်ရဲ့ ဖက်ရှင်စတိုင် ကို သဘောကျကြောင်း သွယ်ဝိုက်ပြော လာ တဲ့ မင်းသမီးချော“မယ်လိုဒီ”
Zar Ti Man | July 15, 2020 | Celebrity | No Comments
အနုပညာမော င်နှမတွေကို အမြဲ Support ပေးတတ်တဲ့ မယ်လိုဒီ ကတော့ ဒီတစ်ခါမှာ ထူးအောင်ကို စနော က်ခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတ စ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါေ စလို့ ဆု‌တောင်းလို က်ပါတယ်နော် …. ပရိသတ် ကြီးရေ မယ်လိုဒီ ကတော့ အသား အရေ ဝင်းလက်ကြည်လ င်ကာ ပြစ်မျိုး မှဲ့မတင် လှပလွန်းတဲ့ မင်းသမီးတ စ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမကိုယ်သူမ “မျိုး”ကလေ ဆိုတဲ့စကားပြော ဆိုဟန်လေးကြောင့် ပရိသတ်တွေ အချစ်ပို နေရတဲ့ သူလေးပါ။ အမြဲစကားပြော ပွင့်လင်း ကာ သူမ စိတ်ခံ စားချက်တွေကို ပရိသတ်တွေကို ပွင့်လင်းရိုး သားစွာပြောလေ့ ရှိတဲ့မင်းသမီးတ စ်ဦးဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေသ ည်းသည်း လှုပ်ချစ်ကြတဲ့ ချောမောတဲ့ သားလေး သိဒ္ဓိစစ်ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးမီက ခင်ပွန်း သည်နဲ့ နှစ်ဦးသဘော တူလမ်းခွဲ ပြတ်စြဲေ ကာင်းကိုကြေညာခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ခင်ပွန်းဟောင်း နဲ့ သူငယ်ချင်းလို ဆက်ဆံရေးရှိကြောင်းလည်း ပြောပြခဲ့ပါေ သးတယ်နော်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နဲ့ ပျော်ပျော်နေတ တ်ကာ စနောက် တတ်တဲ့ မယ်လိုဒီ ကတော့ လက်ရှိလူမှူ ကွန်ရက် စာမျက်နှာ မှာနှု တ်ခမ်းနီမလေးတွေ အပြောများ ကာ ။
သည်းသည်းလှုပ် အချစ်ပိုနေကြ တဲ့ ထူးအောင် ရဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင် နဲ့ ပုံရိပ်ေ လးကို တင်ကာ ” ဒီလိုအင်္ကျီတွေဝတ် ရင် မိန်းကလေး တွေ သဘော ကျလား ဟင် အမျိုးသမီးထုကြီး ရဲ့ အသံေ လး ကြားချင်မိတယ်” ဆိုတဲ့ စာလေး နဲ့ ထူးေ အာင် ရဲ့ ဖက်ရှင် ကိုသဘော ကျကြောင်း အရိပ်အမြွ က်ပြောဆို ခဲ့တာပါ။
ထူးအောငျရဲ့ ဖကျရှငျစတိုငျ ကို သဘောကကြွောငျး သှယျဝိုကျပွော လာ တဲ့ မငျးသမီးခြော“မယျလိုဒီ”
အနုပညာမော ငျနှမတှကေို အမွဲ Support ပေးတတျတဲ့ မယျလိုဒီ ကတော့ ဒီတဈခါမှာ ထူးအောငျကို စနော ကျခဲ့တာပါ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတ ဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါေ စလို့ ဆု‌တောငျးလို ကျပါတယျနျော …. ပရိသတျ ကွီးရေ မယျလိုဒီ ကတော့ အသား အရေ ဝငျးလကျကွညျလ ငျကာ ပွဈမြိုး မှဲ့မတငျ လှပလှနျးတဲ့ မငျးသမီးတ ဈလကျပဲဖွဈပါတယျ။
သူမကိုယျသူမ “မြိုး”ကလေ ဆိုတဲ့စကားပွော ဆိုဟနျလေးကွောငျ့ ပရိသတျတှေ အခဈြပို နရေတဲ့ သူလေးပါ။ အမွဲစကားပွော ပှငျ့လငျး ကာ သူမ စိတျခံ စားခကျြတှကေို ပရိသတျတှကေို ပှငျ့လငျးရိုး သားစှာပွောလေ့ ရှိတဲ့မငျးသမီးတ ဈဦးဖွဈပွီး ပရိသတျတှသေ ညျးသညျး လှုပျခဈြကွတဲ့ ခြောမောတဲ့ သားလေး သိဒ်ဓိစဈကို ပိုငျဆိုငျ ထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးမီက ခငျပှနျး သညျနဲ့ နှဈဦးသဘော တူလမျးခှဲ ပွတျစွဲေ ကာငျးကိုကွညောခဲ့ တာဖွဈပွီး ခငျပှနျးဟောငျး နဲ့ သူငယျခငျြးလို ဆကျဆံရေးရှိကွောငျးလညျး ပွောပွခဲ့ပါေ သးတယျနျော။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး နဲ့ ပြျောပြျောနတေ တျကာ စနောကျ တတျတဲ့ မယျလိုဒီ ကတော့ လကျရှိလူမှူ ကှနျရကျ စာမကျြနှာ မှာနှု တျခမျးနီမလေးတှေ အပွောမြား ကာ ။
သညျးသညျးလှုပျ အခဈြပိုနကွေ တဲ့ ထူးအောငျ ရဲ့ အမိုကျစားဖကျရှငျ နဲ့ ပုံရိပျေ လးကို တငျကာ ” ဒီလိုအကငြ်္ီတှဝေတျ ရငျ မိနျးကလေး တှေ သဘော ကလြား ဟငျ အမြိုးသမီးထုကွီး ရဲ့ အသံေ လး ကွားခငျြမိတယျ” ဆိုတဲ့ စာလေး နဲ့ ထူးေ အာငျ ရဲ့ ဖကျရှငျ ကိုသဘော ကကြွောငျး အရိပျအမွှ ကျပွောဆို ခဲ့တာပါ။
ပုရိသတွေ ကြွေဆင်းသွားလောက်အောင် လှရက်လွန်းနေတဲ့ အိန်ဂျယ်ကို(ဗီဒီယို)
သည်းထိပ်ရင်ဖိုစေတဲ့ အမူအယာတွေ လုပ်ပြနေတဲ့ M ဆိုင်းလု(ဗီဒီယိုဖိုင်)
ရင်ခုန်စရာ အမူအယာလေးတွေ လုပ်ပြနေတဲ့ သံသာမိုးသိမ့်